Football Khabar » कोपा अमेरिका : स्वारेज पेनाल्टीमा चुक्दा उरुग्वे आउट, पेरु सेमिफाइनलमा !
कोपा अमेरिका : स्वारेज पेनाल्टीमा चुक्दा उरुग्वे आउट, पेरु सेमिफाइनलमा !
स्टार फरवार्ड लुइस स्वारेज पेनाल्टी सुटआउटमा चुक्दा उरुग्वे ब्राजिलमा जारी कोपा अमेरिका फुटबल प्रतियोगिताबाट आउट भएको छ । नेपाली समयअनुसार आज बिहान भएको क्वार्टरफाइनल खेलमा उरुग्वेलाई पेरुले पेनाल्टी सुटआउटमा ५–४ ले स्तब्ध बनायो । उपाधि दाबेदार उरुग्वेको हारमा स्वारेज मुख्य कारण बने ।
निर्धारित ९० मिनेटको खेलमा दुवै पक्षबाट गोल नभई खेल गोलरहित बराबरीमा सकिएपछि खेल सोझै पेनाल्टी सुटआउटमा धकेलिएको थियो । त्यसअघि पहिलो हाफ र दोस्रो हाफमा उरुग्वेले खेल नियन्त्रणमा राख्दै पटक–पटक मुभ बनाए पनि गोल निकाल्न सकेन । पेरुले उत्कृष्ट रक्षात्मक खेल खेल्दै उरुग्वेको धारिलो आक्रमण निस्तेज पारिदिएको थियो । खेल अवधिभर उरुग्वेले कूल १२ प्रहार गरेर मात्रै ३ प्रहार टार्गेटमा राख्दा पेरुले मात्रै ३ प्रहार गर्न सकेको थियो ।
निर्धारित समयमा उरुग्वेका लागि फरवार्डद्वय लुइस स्वारेज र इडिसन काभानी दुवैले केही सहज गोलका अवसर बनाएका थिए । तर, उनीहरूको बाटोमा पेरुका गोलरक्षक बाधक बन्दा ९० मिनेट र इन्जुरी समयसम्म पनि उरुग्वे गोलविहीन रहेपछि खेल पेनाल्टी सुटआउटसम्म पुग्यो ।
जहाँ उरुग्वेका लागि पहिलो पेनाल्टी हानेका स्वारेजको प्रहार पेरुका गोलरक्षकले सहजै रोकेपछि उरुग्वेलाई सुरुमै झट्का लागेको थियो । उनको प्रहार सोझै गोलरक्षकको हातमा परेपछि स्वारेज मैदानमै रोएका थिए । स्वारेजको पेनाल्टी विफल भएपछि उरुग्वेका बाँकी ४ जना सबैले गोल गरे पनि पेरुका ५ जनाले गोल गर्न सफल भएपछि खेल पेरुले ५–४ ले जित्यो ।
उरुग्वेका लागि स्वारेजसहित इडिसन काभानी, क्रिस्टियन स्टुआनी, रोड्रिगो बेन्टानकुर र लुकास टोरेरिया डि पासुकाले पेनाल्टी हानेका थिए । जसमा स्वारेजबाहेक सबै खेलाडीले गोल गरे । यता, पेरुका लागि पाओलो गरेरियो, राउल लुइडाइज, योसिमार योटुन, लुइस एडभिनाकुला र इडिसन फ्लोरेस सबैले गोल गर्न सफल भएका थिए ।
यससँगै सर्वाधिक धेरै १५औं पटकको च्याम्पियन उरुग्वे प्रतियोगिताबाटै आउट हुँदा पेरुले भने उपाधि होड कायमै राखेको छ । उसले अब फाइनल पुग्न सेमिफाइनलमा साबिक विजेता चिलीसँग भिडन्त गर्नेछ । अर्को सेमिफाइनल खेलमा आयोजक ब्राजिल र अर्जेन्टिनाको भिडन्त हुनेछ । सेमिफाइनल खेल जुलाई ३ तारिखबाट हुँदैछन् ।
प्रकाशित मिति १४ असार २०७६, शनिबार २३:५३